नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई थुनामा राख्न आदेश !
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई थुनामा राख्न आदेश !
काठमाडौँ / विशेष अदालतले ललिता निवास प्रकरणका आरोपित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई थुनामा राख्न आदेश गरेको छ । मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राख्न विशेषले आइतबार आदेश गरेको हो । आदेश अनुसार बस्न्यातलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ । विशेषको थुनछेक आदेश उपर चित्त नबुझे बस्न्यातले सर्वोच्चमा निवेदन दिन पाउनु हुनेछ ।
यसअघि पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधरण तारेखमा रिहा हुनुभएको थियो । यस्तै, पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई पाँच लाख धरौटीमा रिहा हुनुभएको थियो । यस्तै, पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारी पनि पाँच लाख रुपियाँ धरौटीमा नै रिहा हुनुभएको थियो । यस्तै पूर्व सहसचिव रुद्रकुमार श्रेष्ठ र तेजराज पाण्डे क्रमशः चार र तीन लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा हुनुभएको थियो ।